Chọta Marketinglọ Ọrụ Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi Zuru Oke | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 9, 2009 Sunday, Jenụwarị 13, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na m nọ na ụlọ ọrụ na-achọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi zuru oke, m ga-ahụ ụlọ ọrụ nwere njirimara ndị a:
Agencylọ ọrụ zuru oke na-aghọta otu esi etinye ma tụọ ọkara ọ bụla.
Agencylọ ọrụ zuru oke na-achọpụta teknụzụ niile kachasị ọhụrụ.
Agencylọ ọrụ zuru oke nwere ndị na-ese vidio, ndị nwere olu, ndị na-edepụta akwụkwọ, ndị na-ese ihe nkiri, ndị ọkachamara njikarịcha nchọta, ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa ekwentị, ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa, ndị njikwa ọrụ, ecommerce na ndị ọkachamara mgbanwe, ndị ọkachamara n'ihe metụtara mmekọrịta ọha na eze, ndị ọkachamara maka ịba uru, ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ, ndị ọkachamara ịde blọgụ, ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ, nchịkọta ndị ọkachamara, na ndị mmepe maka ikpo okwu ọ bụla.
Agencylọ ọrụ ahụ zuru oke adịghị adị. Kwụsị ịchọ ha!
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ n'ezie onye ọlụlụ na ịmalite ọrụ ahịa ya, ụlọ ọrụ zuru oke gị kwesịrị inwe njirimara ndị a:
Agencylọ ọrụ gị zuru oke na-aghọta gị, ngwaahịa na ọrụ gị, atụmatụ, usoro azụmaahịa dị n'ime, yana nka ị nwere n'ime.
Perfectlọ ọrụ zuru oke gị maara niche na ha dị ukwuu - ha na-etinye uche na nke ahụ kama ịnwale bụrụ ihe niile nye onye ọ bụla.
Gị zuru okè gị n'ụlọnga na-ọma ejikọrọ na njem, na-amata ebe ị ga-achọ ma gakwuru ndị ọkachamara ụlọ ọrụ. Ha maara ebe ha ga-ahụ ndị na-ese vidio, ndị nwere olu, ndị na-ebipụta akwụkwọ, ndị na-ese ihe eserese, ndị ọkachamara njikarịcha nchọta, ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa mkpanaka, ndị ọkachamara na-ahụ maka akara njikwa, ndị njikwa ọrụ, ecommerce na ndị ọkachasị mgbanwe, ndị ọkachamara n'ihe metụtara mmekọrịta ọha na eze, ndị ọkachamara maka ịba uru, ndị ọkachamara ịkwụ ụgwọ, pịa ndị ọkachamara ndị ọkachamara n'ihe gbasara mgbasa ozi, nchịkọta ndị ọkachamara, na ndị mmepe maka ikpo okwu ọ bụla.
Lọ ọrụ gị zuru oke maara otu esi ejikwa ọrụ tinye n'ọrụ ihe ndi ozo ka ịghara ichegbu onwe gi banyere ya. Perfectlọ ọrụ gị zuru oke nwere ike ịgba ụgwọ gị otu oge, ma lekọta ịkwụ ụgwọ ihe ndị ọzọ niile.
Ternyaahụ, anọ m na onye na-achọ inweta ahịa ma onye nhazi gbakọtara na-erughị ụlọ ọrụ 5 ka ha bịa kpọtụrụ onye ahịa ya. Ọ matara na nsogbu ha karịrị nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ ya nwere n’ime ụlọ ya - yabụ ọ gara wee chọpụta otu ndị ọkachamara n’otu mpaghara nyere aka iji nyere ụlọ ọrụ ahụ aka. E wedara m ala ịbụ otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Ma m ga-arụ ọrụ na atụmanya ahụ ka ga-ahụ… mana obi abụọ adịghị ya na onye ahịa achọtala ụlọ ọrụ ahịa ya zuru oke na Efeffect.
Fọdụ ndị nọ na obodo ahụ kwenyere na ha na ụlọ ọrụ m ma ọ bụ ndị ọzọ na-asọ mpi. Ọ bụ echiche dị warara nke ụlọ ọrụ ahụ. Kama, ngalaba-opetition kwesiri ibu mkpu anyi. Ọ bụrụ na anyị niile arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta nsonaazụ kacha mma maka ndị ahịa anyị, ndị ahịa anyị na-eto, mpaghara anyị na-eto, anyị na-etolite.
Ọkt 9, 2009 na 11:59 PM
Ee n'ezie! M hụrụ mkpokọta, mmekọrịta ọnụ, njikọta ọnụ. Onye ọ bụla na-enweta mmeri.
Ọkt 11, 2009 na 3:31 PM
Ọ na - enyere aka ma ọ bụrụ na, dịka ụlọ ọrụ ị nwere nghọta doro anya nke ihe ị kachasị mma.